चिसोमा के हो निमोनिया ? यसबाट कसरी बच्ने ? | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal चिसोमा के हो निमोनिया ? यसबाट कसरी बच्ने ? | एक्सप्रेस | GNN Nepal
GNN Nepal माघ ११ २०७७, आइतबार
चिसोमा के हो निमोनिया ? यसबाट कसरी बच्ने ?
पुष २८ गते, २०७७ १२:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । निमोनियाका कारण बर्सेनि विश्वभरि लाखौँ मानिसको ज्यान जाने गर्छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष हज्जारौँलाई निमोनियाले सताउने गरेको बताइन्छ। विशेषगरी बालबालिका र वृद्ध उमेरकालाई यसले धेरै सताउने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बढ्दो प्रदूषण र खानपानका कारण पनि निमोनिया बढिरहेको बताइन्छ।
किटाणुबाट सर्ने भएकाले यसबाट बच्न सावधानी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव हुने गर्छ। जाडो मौसममा निमोनिया बढी फैलने भएकाले चिसोबाट बच्नुपर्नेमा उनीहरू जोड दिन्छन्।
के हो निमोनिया ?
फोक्सोको तन्तुहरू संक्रमित भई फोक्सोमा देखा परेको प्रदाहत्मक स्थितिलाई चिकित्सकीय भाषामा निमोनिया भनिन्छ । निमोनिया श्वास प्रणालीको सबैभन्दा तल्लो भाग वायुकोष्ठिकाको संक्रमण हो । निमोनियाको संक्रमण फोक्सोको तन्तुहरूमा भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गस (ढुसीको), माईकोप्लास्म वा परजीविहरुको संक्रमण तथा अनियमित किटाणुले हुने गर्छ । किटाणुहरूको अलावा छातीको चोटपटक, फोक्सोको घाउ तिव्र रसायनहरुको धुवा, आत्मघाती प्रतिरक्षा प्रणाली र औषधिहरुको एलर्जीका कारणले पनि निमोनिया हुन सक्छ ।
बालबालिकामा हुने निमोनिया धेरैजसो भाइरसको कारणले हुने गर्छ । केही भाइरल निमोनिया विस्तारै ब्याक्टेरियल निमोनियामा परिणत हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । निमोनियाको संक्रमण जाडो मौसममा बढी हुने गर्दछ । अधिकांश स्थितिमा निमोनिया हुँदा फोक्सोको क्रियात्मक इकाई आल्वियोलाई (फोक्सोको तन्तु र रक्तकोषीका बीच प्राण वायुको आदान प्रदान हुने थैली) संक्रमित हुने गर्दछ ।
स्वस्थ्य अवस्थामा हावा भरिएका यी आल्वियोहरूमा संक्रमण पश्चात पानी र कफ जमेर सुन्निन थाल्छ । तत्काल चिकित्सकिय व्यवस्था हुन नसके निमोनिया फोक्सोको अधिकांश हिस्सामा फैलियर फोक्सोले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आउँछ र व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ ।
यसबाट कसरी बच्ने ?
१) अदुवा र बेसारको चिया – अदुवा र बेसार राखेको चिया पिउनाले लगातार आइरहने खोकीका कारण हुने छातीमा दुखाईलाई कम गर्छ ।
२) पुदीना चिया – पुदीनामा ‘एन्टी–इन्फ्लेमेन्ट्री’ तत्व उपलब्ध हुन्छ । पुदीनाको चिया पिउनाले छातीमा हलुका महशुस गराउँछ र यसले छातीमा दुखाईलाई पनि कम गर्छ । तपाई पुदीनालाई उमालेको ता–तातो पानी पिउन सक्नुहुन्छ, यसले घाँटीमा हुने खसखसबाट राहत दिन्छ र कफ पनि बाहिर निकाल्छ ।
३) कफी पिउनुहोस् – तातो कफी पिउनाले निमोनियाका कारण हुने श्वाससँग जोडिएको समस्यामा राहत मिल्छ । कफीमा उपलब्ध कफिनले फोक्सोमा भरिएर रहेको फोहोरलाई निकाल्छ र श्वास लिन सजिलो बनाउँछ ।
४) मह – महमा उपलब्ध एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिओक्सिडेन्ट तत्वले निमोनियाबाट हुने उत्पन्न कफबाट राहत दिन्छ । २–३ गिलास तातो पानीमा एक चम्चा मह मिलाएर प्रत्येक दिन पिउनाले निमोनियामा केही आराम मिल्छ ।
५) ता–तातो सुप – मौसमी सब्जिबाट बनेको सुपले तपाईलाई पोषण दिने मात्रै नभएर तपाईमा संक्रमणबाट बच्न आवश्यक तरल पदार्थको पनि आपूर्ति गर्छ । तातो तरल पदार्थ पिउनाले शरीर तातो रहन्छ र चिसो लाग्नबाट बचाउँछ ।
असोज ४ गते, २०७७
भाइटीकाको भोलिपल्टदेखि खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना नबाढ्ने
ओलीलाई थप कारबाहि गर्न प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
२ सय ३२ कोरोना संक्रमित थपिए, आठको मृत्यु
रोमाञ्चक विश्व- जहाँ पुगेर जीवनमा आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ…
चाणक्य निती : आफूले चाहेको सफलता हात पार्ने यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
रुपन्देहीमा खानेपानी पाइपमा भिषण आगलागी
अनुहारमा चाउरीपन आउन नदिन के गर्ने ?
ट्रम्पमाथिको महाभियोग अर्को महिना सुरु हुने, दोषी ठहर भए २०२४ को चुनाव लड्न नपाइने
विश्वमा कोरोना अपडेट : कोभिडको नयाँ प्रकारको भाइरस पुरानो भन्दा छिटो फैलने र बढी घातक
मलेशियामा मृत्यु भएका १७ नेपालीको शव नेपाल ल्याइयो
बन्द सफल पार्ने देशभर विप्लवको हिसांत्मक कार्य, तीन कार्यकर्ता प्रकाउ
तस्बिरहरुमा एक साताको विश्व
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि कावासोतीमा दुईको मृत्यु
बढ्दै विप्लव समूहका गतिविधि : आज बिहान मात्रै देशका दुई भागमा भेटियो कुकर बम
कार्यकर्ता प्रकाउ गरेको भन्दै विप्लव समूहले गर्यो सुदूरपश्चिम बन्द